२६ बैशाख २०७८, आईतवार १२:५१ PM
३ चैत्रसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित
२६ फाल्गुन २०७७, बुधबार १४:३५ मा प्रकाशित
२०७७ फाल्गुन २६ मङ्गलबार, काठमाडौं । संसदको सातौं अधिवेशनको दोस्रो बैठक सकिएको छ । पुनः ३ चैत्रमा बस्ने गरी बुधबारको बैठक सकिएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदहरुलाई जानकारी गराए । बैठक दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको छ ।
आजको बैठक शुरु हुनुअगावै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने बाहिरिएका थिए । यसअघि गत २३ गते बसेको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओली सहभागी थिएनन् ।
आजको बैठकले १४ जना पूर्व तथा बहालवाला सदस्यको शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु सानु शिवा, सूर्यबहादुर केसीसँगै संविधान सभाका सदस्य रहेका मानपुर चौधरी र भीमप्रसाद गौतमको शोक प्रस्ताव पारित गरिएको हो ।
त्यस्तै पूर्वसदस्यहरु दीपकबहादुर गुरुङ, डा. राममान श्रेष्ठ, वीरबहादुर लामा, ओमकारप्रसाद गौचन, इन्द्रहाङ लिम्बु, कमानसिंह लामा, गंगादत्त जोशी, एकनाथ रानाभाट, कुवेरप्रसाद शर्मा र डा. शंकरप्रसाद उप्रेतीको शोक प्रस्ताव पनि पारित भएको हो ।